EX - ABSDF: October 2012
Politicide (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား နိုင်ငံရေးအရ အသေသတ်ခြင်း (အပိုင်း - ၁)
by U U Mhaw Sayar on Tuesday, October 30, 2012 at 8:13pm ·
Politicide ဟူသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ရေး စသည်ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဖိအားပေးဖြိုခွင်းခြင်းအားဖြင့် ယင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိကြမ္မာ မိမိဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိစေခြင်းငှာ စနစ်တကျနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နိုင်ငံရေးအရ အသေသတ်ခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပေသည် ။ Politicide ကို မြန်မာမှုပြုလျှင် နိုင်ငံရေးအရ အသေသတ်ခြင်း ဟူ၍ ခေါ်ဆိုရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ Politicide ဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့်ပက်သက်၍ စာဖတ်သူများ ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်စေရန် အလွယ်တကူ သိမြင်နိုင်သော ကမ္ဘာကျော် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်းအရေးနှင့် ဥပမာပေး၍ ရေးသားပါမည်။ Read more »
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃၁-၁၀)
အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ငယ် (၁၈၀)လက် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့
မလေးသွားမှောင်ခိုဘုတ် နစ်မြှုပ်၍ (၁၂၈)ဦးအနက် (၁၂၂)ဦးပျောက်ဆုံးနေ
မြန်မာအစိုးရ ပြည်ပဘဏ်များတွင် ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလီယံအပ်နှံထားဟုဆို
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ခြေလွတ်လက်လွတ် အိပ်မက်များ
ပြည်ပကြွေးမြီ ဆယ်လအတွင်း ဒေါ်လာ လေးဘီလီယံတိုး
စွပ်စွဲမှုများအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ADSL စနစ်အသုံးပြုလိုသူများ သိရှိစေရန်
ဖားကန့် ၌ ငြိမ်းချမ်းပါစေ မီးပုံးလွှတ်တင်ခဲ့သော်လည်းလူ(၂)ဦးသေဆုံး
တရုတ်သို့ပိုရန် ဆမ္မဆယ်၌ နွားကောင်ရေ (၅၀၀)ကျော် ရောက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး မလိုလားဟုဆို
ရန်ကုန်တွင် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်လူသတ်မှု ပိုများလာ
ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ)
by Maung Wuntha on Tuesday, October 30, 2012 at 6:29am ယခုအပတ်ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ပါ မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး။
အခုလောလောဆယ်မှာ ]အဆိုးထဲက အကောင်း}ဆိုသလို တစ်ဖက်မှာ သေမိန့်ကျရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အများနားလည်ထားကြတဲ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အရင်ကနဲ့စာရင် အချိန်ပိုရသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် စာတွေ ပိုပြီး ဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် ဒီကနေ့ စာဖတ်သူအများစုကို သူ့ထက်ငါကောင်း အပြိုင်အဆိုင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်နေကြတဲ့ ဂျာနယ် တွေကို ပိုပြီးတော့လည်း များများ၊ ပိုပြီးတော့လည်း စူးစူးနစ်နစ် ဖတ်ဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသော ဒေါ်မိမိခိုင်၏ တင်ပြချက် ။
by ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ on Tuesday, October 30, 2012 at 10:38am ·
လေးစားအပ်ပါသော တိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူများရှင့် …
ကျမ ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများအကျိုးဆောင်ကွန်ယက်က ဒေါ်ခင်မိမိခိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃ဝ-၁၀)
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးသည့် နေ့ ဖားကန့် တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကျောက်နီမော်တွင် ရခိုင်ဒေသခံ များကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ် ထိန်းသိမ်းရာမှ တစ်ဦးသေ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
ကျောက်နီမော်လူထု တောင်းဆိုချက်(၃)ချက် အာဏာပိုင်တို့လိုက်လျော
ကျောက်နီမော် အခြေအနေ တင်းမာ
အဖြစ်ဆိုးခဲ့တဲ့ ၈ တန်းကျောင်းသူလေး
လိုင်စင်ဘောင်ကျော်ပြီး ဖော်ပြသည့် ဂျာနယ်များကို အရေးမယူတော့ဟုဆို
အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆို
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာတွင် အခင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင် ၁၃ ဦး သေဆုံး
ကချင်စစ်ရေးတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သမ္မတ အမိန့်ကို နာခံမည်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းစဉ်အတွင်း တပ်မတော်မှ လက်နက်ကြီး ၁၄ လုံးပစ်ဟု ကေအိုင်အို ဆို
လက်ပန်တောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေး
by Naung Taw Lay on Monday, October 29, 2012 at 12:32pm လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားဟာ မထင်မရှားရှိနေခဲ့ရာမှ အုံးအုံးကြွ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ အဲဒီဒေသကို သွားရမယ်ဆိုကတည်းက လက်ပန်တောင်းတောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းနောက်ခံ ၊ ဒေသခံတွေရဲ့ အခြေအနေ၊ ပြဿနာကြီးထွား လာရခြင်းရဲ့ အစ၊ နိုင်ငံရေးသမားရဲ့ ရှုထောင့် ၊ ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကြောင့်ရပ်တန့်လို့ မရသလဲ ဆိုတာ ကိုပါပြောပေးနိုင်ရင် ပိုပြီးပြည့်စုံတာပေါ့။ သက်ဆိုင်ရာတွေဆီက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို မှတ်တမ်းပြုစုထားကိုပါ ရနိုင်ရင် ပြည်သူအများသိအောင် ချပြပေးစေချင်တာပါ။
by Myanmar Journal on Monday, October 29, 2012 at 8:59pm ·
ကော့ကရိတ်မြို့ တွင်းရှိ ဗလီ ဗုံးခွဲခံရ
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကျုံဒိုးရွာ ဗလီကို ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ဆိုက္ကယ်နဲ့လူတယောက် က လက်ပစ်ဗုံး တလုံးနဲ့ ပစ်ပြေး သွားပြီးတော့၊ ကော့ကရိတ်မြို့ ရေနံဆီကုန်းရပ် က ဗလီကို လည်းဆိုက္ကယ်နဲ့ လူနှစ် ယောက် က ည ၁၂ နာရီခွဲလောက် မှာ ဗုံးနှစ်လုံး နဲ့ပစ်ခတ်သွားတာ လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဗြိတိသျှတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အကောင်းတိုင်း အစိတ်အပိုင်းလိုက်မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားတွေကို ပြန်လိုချင်ပါသတဲ့ ။အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အံများတောင်သြပါရဲ့ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော် ကတည်းက ရှာဖွေနေခဲ့ပါသတဲ့ ။အခု မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းတွေရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ apple ရဲ့ နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ရှာဖွေမှုနဲ့ လေယာဉ်းအစင်း ၂၀ ကျော် ကို ပြန်တူးပြီးအကောင်းတိုင်းပြန် ယူတော့မယ်တဲ့ ။
မှားခဲ့တာလား ၊ မှားနေဆဲလား ၊ ဆက်ပြီး မှားအုန်းမှာလား
NLD က ၉၀ တုန်းက တပြည်လုံးမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီ။ အစိုးရကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းရမယ့် ပါတီ ပါ။ ဒါပေမယ့် NLD အပါအ၀င် အနိုင်ရပါတီအားလုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး စစ်သားနိုင်ငံရေး မလုပ် တတ်ဘူးဆိုပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာ၊ အာဏာပြဿနာကို ကလေးကလား သွားလုပ်မိလိုက်ကြတော့ ဗိုလ်ချုပ် စောမောင်ဆီမှာ ဗြောင်အလိမ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၉-၁၀)
အခန်း ပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်ပါ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း အကောင်ထည် ဖော်မည်
ကော့ကရိတ်မြို့ဗလီကို လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းဖွင့်ထားသော ဟိုတယ်ကြောင့် အနီးရှိပြည်သူများအနှောက်အယှက်ဖြစ်လျက်ရှိ
ပြည်ကြီးတံခွန် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ တာဝန် ရှိသူများ၏ လုပ်ရပ်များ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ကျောင်းဆရာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်
ကြံ့ ဖွံ့ ပါတီ၊ နိုင်ငံတော်အလံအား ပြောင်းပြန်လွှင့်ထူ ခဲ့တဲ့ သတင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် TRUR NEWS (သစ္စာ) သတင်း ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် နှုတ်ထွက်
ကြံ့ ဖွံ့ ပါတီ၊ ပါတီညီလာခံ ဖွင့်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်အလံအား ပြောင်းပြန်လွှင့်ထူ
နွမ်းပါးကလေးငယ်များအတွက် သင်တန်းများ ပို့ချကာ စောင့်ရှောက်ပေးသည့် အဖွဲ့များ ရှိလာ
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven News Journal အတွဲ ၈ အမှတ် ၄
အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် သတင်းဂျာနယ် အမှတ် (၂၄)
စန္ဒီမုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲအထိ ထိခိုက်နိုင်
((((((နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူ . . . ဘယ်သူလဲ ))))))
Written by ဦးကျော်စိန် (ပညာရေး-ငြိမ်း)Sunday, 28 October 2012 12:20
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၁၂) အရ “ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ တွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့်” ဟ
by Myanmar Journal on Sunday, October 28, 2012 at 8:45pm ·
စန္ဒီမုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲအထိ ထိခိုက်နိုင်
စန္ဒီအမည်ရှိတဲ့ အင်အားပြင်း ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းဟာ နယူးယောက်ကို ဝင်တော့မှာပါ။
နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ ကျင်းပတော့မယ့် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုတောင် အများကြီး ထိခိုက်နိုင်ချေရှိတဲ့ စန္ဒီလို့ အမည်ရတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်း ကုန်းတွင်းကို စတင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း(၄) ညှင်းပန်နှိပ်စက်မှု ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု
by မင်းခက်ရဲ (Min Khet Ye) on Saturday, October 27, 2012 at 8:23pm ·
ညှင်းပန်နှိပ်စက်မှု ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ချို့ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ်ထွက်ပေါ် လာတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ခုကျွန်တော်တို့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှု၊ လူသားဆန်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတွေကို ညွန်းဆိုလိုပါတယ်။ ဒီရာဇ၀တ်မှုတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာ တရားစွဲခံ ရသလို၊ နိုင်ငံအဆင့်မှာလည်း တရားစွဲတာမျိုးရှိပါတယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ် မှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကို အကြွင်းမဲ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာ အထင်အရှားပါပဲ။ Read more »
ဒီမိုကရေစီအတွက် ရုန်းကန်ကြ - အမှတ်စဉ် (၉) မျိုးသန့်
by Myo Thant on Saturday, October 27, 2012 at 9:22pm ·
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ သဘောက အရပ်ဖက် နိုင်ငံရေးအစိုးရမျိုး ဖြစ်လာအောင် ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးဖြစ်တယ်။ လူတိုင်း မိမိအလုပ်ကို မိမိသိရှိနားလည်းပြီး၊ အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားသော လူကို တန်းဖိုထားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၁၀)
မကွေး NLD‭ ‬ပါတီဝင်များ‭ ‬အစုလိုက် ပါတီ ကူးပြောင်းသတင်း မမှန်ဟု ဆို
Governor ဟိုတယ် နှင့့် မြန်မာ ဧည့်လမ်းညွှန်ကြား ပြဿနာ ဖြစ်ပွား
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း သောင်းနဲ့ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်း စုစည်းမှု
မွန်ပြည်နယ် ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့မှ ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် လူသေဆုံးမှု
ရခိုင်ဒေသမှ ပဋိပက္ခမီးလျှံများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခက်ဆစ် အဖြေ
နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူ . . . ဘယ်သူလဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြန့်ကျက်ချထားသော လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား
အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ (၄)၊ အမှတ် (၃)
အောက်တိုဘာလ (၂၄)ရက်နေ့ ထုတ် Mobile Guide ဂျာနယ် Vol, Issue. 75
တရုတ် သံရုံး ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ခြေရှုပ် မှု များ-- အပိုင်း (၂)
တရုတ် သံရုံး ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ခြေရှုပ်မှု များ -- အပိုင်း (၁)
Sandy မုန်တိုင်း ဟာရီကိန်းအဖြစ် ပြန်အားကောင်း
“နိုင်ငံရေးမှာ စောတာ နှေးတာ မရှိဘူး” ABSDF ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ABSDF အနေနဲ့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့တွေက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းထား တာရှိလား။
ဒီကမ်းလှမ်းထားတာတော့ ရှိတာပေါ့။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းငြိမ်း ချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့က နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကိုး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာ ဆို ဦးအောင်သောင်းဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာကို တန်းတူညီတူ ဖြေရှင်းဖို့ကမ်းလှမ်း လာခဲ့တယ်။ ABSDF က နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ အဖြေရှာဖို့ ပြောတော့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုဖို့ သဘော တူခဲ့တယ်။ အလွတ်သဘောပေါ့။
by မိုးကြာညို မိုး on Thursday, October 25, 2012 at 11:20pm ကိုယ်ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်.. အဒေါ့်သမီးဆိုင်မှာလုပ်ပါ့မယ်လို့.....
အထမ်းသမတဲကို ကိုယ်ပြန်ပြီး ကိုယ့်ရှိသမျှ အ၀တ်အစားလေးတွေ လွယ်အိတ်လေးထဲထည့်
ခေါင်းအုံးအနွမ်းလေးနဲ့ စောင်ပါးလေးကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး မဲ့ဆောက်ဈေးကို
အဒေါ်ကြီးနဲ့ တူတူလိုက်ခဲ့ပါတယ်.... ကွေ့တီယိုဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖူးပြီး ရှမ်းစကားလဲ ရနေပြီဆိုတာ့
ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ကူညီညာလုပ်ရတာ ကိုယ့်အတွက် မခက်ခဲလှပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဆိုးနေတာက...
ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာဘူးကွယ်.... အဒေါ်ကြီးက ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသလောက်
သူ့သမီးနဲ့သားမက်က လောင်းကစားမက်လွန်းတယ်... ညဆို မိန်းမရောယောက်ျားရော ဖဲဝိုင်းက
ည ၁-၂ နာရီရှိတယ်..
by Myanmar Journal on Saturday, October 27, 2012 at 5:29pm ·
ဆီးရီးယားမှာ အပစ်ရပ်ပေမယ့် တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အစ်ပွဲတော် အတွင်း ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ တွေနဲ့ သူပုန် တိုက်ခိုက်ရေး သမားတွေ အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲ မယ်လို့ သဘောတူ ခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယမြောက် နေ့မှာ တော့ ဆီးရီးယားနဲ့ တူရကီ နယ်စပ် တလျှောက်မှာ သေနတ် သံတွေ ထွက်ပေါ်နေ ပါတယ်။
ဒမားစကပ်စ်မြို့မှာလည်း အစိုးရ ကနေ အမြောက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ရရှိတယ်လို့ အဲဒီ နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ပြောပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၁၀)
ကလေးငယ်အများစု ပညာသင်ကြားခွင့် ဆုံးရှုံးနေဆဲဟုဆို
ခေါင်းဆောင်တွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှု သင်ပုန်းချေ လိုက်ကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ပြောဆို
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် မြို့နယ် ၂၀တွင် စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည်
ရခိုင် ကျောက်တော်၌ သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူ တစ်ဦး ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေ
မြေပုံမြို့မှာ အမျိုးသမီးတွေ ဆန္ဒပြ
သေဆုံးစာရင်း အစိုးရပြင်ဆင် ထုတ်ပြန်
လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးသော ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား
ဗဟိုတရားရုံးအား ပုဂ္ဂလိက သို့လွှဲ ပြောင်းငှားရမ်းမည် မဟုတ်ဟု သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ပြော
မန်းရှိ အသက်၁၂၀ပြည့်အဖွားအားး ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်
အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly No.8/Vol.43
အာဖဂန်ဗလီဗုံးခွဲ ၄၀ မက သေဆုံး
ဟာရီိကိန်း "စန္ဒီ" အမေရိကအရှေ့ကမ်း ဦးတည်
by Win Ko on Friday, October 26, 2012 at 7:27pm မနက်လင်း အိပ်ရာနိုးသည်နှင့် သားနှစ်ယောက်ဘဝရှေ့ရေးအတွက် ဇနီးသည်နှင့် စကားအခြေအတင် ဖြစ်ရသည်က နေ့စဉ်ရက် ဆက်ဖြစ်နေပြီ။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ဒုတိယအကြိမ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။ ထိုအချိန်က သားကြီး ၄ လသားသာ ရှိသေးသည်။ ယခုသားကြီးအသက်က ၇ နှစ်အတွင်း၊ ဒုတိယမွေးသည့် သားငယ်အသက်က ၄ နှစ်အတွင်း ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
by မင်းခက်ရဲ (Min Khet Ye) on Friday, October 26, 2012 at 7:02pm ·
ကုလသမဂ္ဂဟာ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို တည်ထောင်စမှာ အဓိကအဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး ပါဝင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်၉ဦးက ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူတို့အစိုးရတွေရဲ့ အမြင်ထက် လွတ်လပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ပြုမူသင့်တယ်လို့ အဆိုပြုတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစိုးရတွေက ဒါကို ပယ်ချတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ကော်မရှင်ဟာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲက ၁၈နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းသင့် တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။၁၉၆၇မှာ အဖွဲ့ဝင်ကို ၃၂ယောက်အထိ ချဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ၅၃ယောက်အထိ ဖြစ်လာတယ်။ ၂၀၀၆မှာ ကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ၄၇ယောက်ပါတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ အစားထိုးလိုက်တယ်။ ကောင်စီအသစ်ကို မစမ်းစစ်ခင် ၊ ကျွန်တော်တို့ခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားသင့်တာက နှစ်ပေါင်း၆၀ခရီးမှာ ကောင်စီရရှိ လိုက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကဘာလဲ။
ယမ်းငွေ့ ဝေနေသော ဘ၀နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အိပ်မက်
win lay winchitlay@gmail.com
သေနတ်ကိုင်ထားသော ဗိုလ်ကြီး မင်းဌေး လက်များ တုန်နေသည်။ ရှေ့တွင်ရှိသော ပိန်ပိန် ပါးပါး အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မပစ်ရဲ။ သူက ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်သည်။ သူက ချိန်ထားသော သေနတ်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ဖြတ်ကျော်သွားသည်။
ယင်းမြင်ကွင်းမှာ သမိုင်းအလွဲများကို ရိုက်ကူး ထားသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံသားများက တူညီစွာ မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုနေကြသည့် The Lady ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားထဲမှ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကိုမင်းဌေး သည် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နှင့် မဟာမိတ်တပ် အဖြစ် ရပ်တည်နေသော ABSDF (ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး) မြောက်ပိုင်းတပ်တွင် ဗိုလ်မှူး အဆင့်ဖြင့် တိုက်ပွဲ များကို ဆင်နွှဲနေသည်။
by Myanmar Journal on Friday, October 26, 2012 at 6:56pm ·
အီတလီ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ထောင်ကျ
အီတလီ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာလူးစကိုနီ ထောင်ကျ
အီတလီ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆာဗီယို ဘာလူးစကိုနီကို မီလန်တရားရုံးကနေ အခွန်ရှောင်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ် အပြစ်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အီတလီ ထောင်တွေထဲမှာ အကျဉ်းသား အရေအတွက် နည်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၀၆ က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ဥပဒေအရ ထောင် ၃ နှစ် လျှော့ပေါ့ လိုက်လို့ ထောင်တနှစ်ပဲ ကျခံရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအိတ်ထဲကျည်ဆန်ထည့် စိန်ခေါ်ခံရပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နောက်မတွန့်သူ
ရေးသားသူ- အားမာန်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားမှု အရှည်ကြာဆုံးနိုင်ငံဟု မှတ်တမ်းဝင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ တစ်နှစ်အတွင်း အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရှေ့တန်းမှဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အရေးပါသူတစ်ဦး ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ တာဝန်ပေးမှုအရ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်
ဒေါသကြီးသောခွေး နှင့် သင်္ဘောသီးပြုတ်
လှိုင်ဘွားငယ်ငယ်တုံးကပေါ့။ ပုသိမ်နဲ့ 
ဟင်္သာတကြားက ရထားလမ်းဘေးက အဖေ့ရဲ့မွေးရပ်မြေမြို့ ကလေးတမြို့ ကို
အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ Read more »
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၁၀)
သစ်ထူးလွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ် မင်းပြား၊ မြောက်ဦးတွင် မီးဘေး ဒုက္ခသည်နှင့် နေအိမ် စွန့်ခွာသူ(၃၀၀၀)ခန့်ရှိ ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးအဆို လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင် ရမ်းဗြဲမြို့တွင် မီးဆက်လက် လောင်နေဆဲ ရမ်းဗြဲမြို့တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေ ရှေးဟောင်း ခေါင်းလောင်းကြီး မဟာစန္ဒာ မုနိမြတ်စွာ ဘုရားကြီးဝင်းတွင် တူးဖော်ရရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့တွင် မီးလောင်မှု ဆက်ဖြစ် OIC အား တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် မင်းပြားပြသာနာ စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများဆို ဆန္ဒပြမည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်၍ လုံခြုံရေးများ ချထား သမ္မတကြီးနှင့် သူ၏သတင်းထောက်များ Read more »
လူသေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ် ထားပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ရည်ညွှန်းတာက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို မရည်ညွှန်းဘဲ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ အယ်ဒီ တာတွေ ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်တွေ စာနယ် ဇင်းတွေက လူသတ်နိုင်လို့လားဆို တော့၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ မှားရင် တစ်ဦးချင်းသာ သေစေနိုင်ပေ မယ့် ဂျာနယ်တွေ စာနယ်ဇင်းသမား တွေ လုပ်ရင် တစ်ဦးထက်မက သေ စေနိုင်လို့ပါ။
(ဟိုတလောက ရိုဟင် ဂျာကိစ္စနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးနော်။) အခုတလော ဂျာနယ်တွေ ဖတ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ် သေတဲ့သတင်းတွေ အတော်လေး ပါလာတာကို တွေ့ကြရပါတယ်။ Read more »
by Myanmar Journal on Thursday, October 25, 2012 at 7:25pm ·
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဒေါ်လာ ၃ သန်းတန် အကူအညီ စတင်မည်
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ NGO အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုဖြစ်သည့် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း (The Nippon Foundation) မှ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား စစ်ဘေးဒဏ်သင့် ဒေသများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သန်းတန် ဆန်နှင့် ဆေးဝါး အကူအညီများကို လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ၏ ပထမသုတ် အနေဖြင့် ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ပြန်လည်လွမ်းဆွတ်မိတတ်တဲ့ ဘ၀ဟာ ကျောင်းသားဘ၀လို့ ဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀တွေက အစပြုလို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ တွေအထိ ကျောင်းသားဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရတွေက ရင်ထဲမှာ အတိုင်းအတာ တခုအထိ နေရာယူထားတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီလိုနေရာယူထားတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀လေးတခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မွေးဖွားရာဇာတိ၊ တောင်ကြီးမြို့က အထက (၄) ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ပညာရည်နို့ သောက်စို့ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀လေးပါပဲ။
by Myanmar Journal on Wednesday, October 24, 2012 at 4:27pm ·
ဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှု ၅၆ နှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြ
ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ ဘူဒါပက် မြို့တော်က အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး နဲ့ ထောက်ခံ ဆန္ဒပြပွဲကြီး တွေမှာ လူ သောင်းနဲ့ချီပြီး ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုဗီယက် ကျူးကျော်မှု ကို ဆန့်ကျင် ခဲ့တဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ဟန်ဂေရီ အရေးအခင်း ၅၆ နှစ် ပြည့်တဲ့ အချိန်လဲ ကျရောက် နေပါတယ်။
သူ့ ထောက်ခံသူ တွေကို မိန့်ခွန်း ပေးရာမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဗစ်တာ အော်ဘန်းက သူ့ အနေနဲ့ ဘယ် နိုင်ငံခြား ခိုင်းစေမှု ကိုမှ နာခံ မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ဟန်ဂေရီကို အသုံးစရိတ် လျှော့ချဖို့ ဖိအား ပေးနေတဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ ကို ဝေဖန် ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါရာဒိုင်း ပါမောက္ခ ဖူကူယားမား၏ ပို့ချချက် - နှင့် စာရေးသူ၏အတွေးအချို့ (ကျော်ဝင်း)
by Kyaw Win on Monday, August 27, 2012 at 5:19am ·
မြန်မာပြည်ပြောင်းပါပြီ။ ဤအပြောင်းအလဲကို၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ၊ သဘောထားတင်းမာသူ အချို့ကပင်၊ သိမှတ်လက်ခံလာကြ ပါပြီ။ ယခင်ကဆိုလျင်၊ လူအရှင်လတ်လတ်မဆိုနှင့်၊ သူတို့စာတွေကိုပင်၊ မရဲတရဲ မိတ်ဆက်နေကြရသော၊ ကမ္ဘာသိ ပညာရှင်တွေ၊ ဝင်လာ မဆဲ၊ တသဲသဲ ရှိလာသည်။ ယခုနှစ်ပိုင်း ၂၀၁၂ ကိုပဲကြည့်။ ထောမတ်ကရိုသာ၊ မန်မိုဟန်ဆင်း၊ ပေါ(လ)ကိုလီယာ၊ လာရီဒိုင်းမွန်း၊ … အခု ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား …။ အားလုံးမှာ စာရေးသူ ဒိုင်ခံမိတ်ဆက်ပေးနေသည့် ပညာရှင်တွေချည်း …။ သူတို့စာတွေ ဖတ်ရင်း၊ အဝေးက ကြည်မော နေရသူအနေနှင့် သူတို့နှင့်တွေ့ချင်ဆုံချင်သည်။ မေးချင် မြန်းချင်သည်။ ကြားချင် နာချင်သည်။ သို့တစေ၊ ဖိတ်စာမရ၍၊ အကုန်လုံးနှင့်တော့ တွေ့ခွင့်မရ။ သည်တစ်ခါ၊ ဖူကူယားမားကိုတော့၊ မင်္ဂလာမြန်မာ ဇနီးမောင်နှံ ကျေးဇူးကြောင့်၊ တွေ့ခွင့်ဆုံခွင့်ရသည်။ သူ့ပို့ချချက်ကို ကြားနာခွင့်ရသည်။ အရတော်လေစွ။ ကျေးဇူးအထူးပါ မင်္ဂလာ မြန်မာ …။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၁၀)
အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စဖို့ KIO သဘောတူ
မြောက်ဦးမြို့ဆူပူအကြမ်းဖက် မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှု ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိ
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို တရားခံပြေး အဖြစ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
ကေအိုင်အေက ကျောင်းသားများ အပါအဝင် ဒေသခံ ၂၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး
ယခုနောက်ဆုံး မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြား၊ ကျောက်ဖြူနှင့် မြောက်ဦးမြို့များ လုံခြုံရေးအဆင့် မြှင့်
ရန်ကုန်မြို့တွင် စက်မှုဇုန် မြေကွက်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ မြေဈေး ကစားသူများ၏ လက်တွင်းကျရောက်နေ
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ရန် ဆွေးနွေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် သက်သေ လိုက်ပေးလိုသည့် အမှုမှ ပါတီဝင်(၁၁)ဦးအား ဇမ္ဗူသီရိ တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ကျောက်ဖြူမှ မွတ်ဆလင်များ စက်လှေ အစီး ၄၀ ကျော်ဖြင့် ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေး
မပြေလည်သေးသော ရခိုင်အရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိုးရိမ်
ဘင်္ဂါလီကျေးရွာများနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် မေးမြန်း
မြေပုံရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
by Myanmar Journal on Tuesday, October 23, 2012 at 4:32pm ·
Obama နဲ့ Romney နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအမြင်ကွဲပြား
အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့ သမ္မတလောင်း Mitt Romney တို့ဟာ တနင်္လာနေ့က ကျင်းပတဲ့ တတိယမြောက်နဲ့ နောက်ဆုံး အကြိမ် စကားစစ်ထိုးပွဲအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ပြောဆိုမှုတွေ အပြန်အလှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး Mr Romney ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ သမ္မတ Obama က ပြောသွားပါတယ်။
7Day News Journal အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ်(၃၂)အောင်အောင်(IR)ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒီနှစ် မေ၊ ဇွန်လများအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သောအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ငြင်းခုံမှုတွေ၊ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ယခုအချိန်အထိအဆုံးမသတ်နိုင်သေးပါဘူး။ အချိန်တိုတိုအတွင်း ဒီပြဿနာအေးငြိမ်းသွားဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေဟာရှေ့လျှောက် ပိုမိုကျယ်လောင် ရှုပ်ထွေးလာမယ့် အလားအလာတွေတောင်တွေ့လာနေရပါတယ်။ အခုထိကို ဆန္ဒပြပုံရိပ်သတင်းတွေက စာနယ်ဇင်းတွေမှာတက်လာနေဆဲပါ။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ဒီကိစ္စ ပိုပြီးအရှိန်မြင့်တက်မလာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ ဒီကိစ္စဟာပြောဆိုဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်လာနေပြီး အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပြုလာတာတောင်ရှိပါတယ်။
နံနက်အိပ်ယာမှထပြီး ထမင်းတအိုးချက်လိုက်သည်။ ထမင်းကျက်တော့ ဟင်းချက်စရာကဘာမှမရှိ။ မနေ့ကတဲကတွေးမိသည်။ ဒီနေ့စာအတွက် အဖြေမရ။ မရဲတရဲအတွေးတခု ဖြတ်ခနဲဝင်လာသည်။ ယူနေကြဆိုင်မှာ ကြက်ဥသုံးလုံး အကြွေးသွားယူရင်ကောင်းမလား… ချီတုန်ချတုန်ဖြစ်နေ၏။ ယူထားတဲ့အကြွေးကလည်း များနေပြီမို့ အားနာနေမိသည် ။ နံနက်စောစော သူများဆိုင်မှာ အကြွေးသွားယူဖို့ ဆိုတာကလည်း မဖြစ်သင့် ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချလိုက်သည်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၁၀)
ဖမ်းထားသည့် ရခိုင် ၁ဝ ဦးကို လွှတ်ပေးရန် မင်းပြားတွင် ဆန္ဒပြ
သွေးနုသားနု ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် သစ်အား သည်းခြေ ပျက်စေမည့် ဇာတ်လမ်း နောက်ဆက်တွဲ
အီးဒ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ပွဲတော်ကျင်းပမည်မဟုတ်တော့ဟု အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
အထမ်းသမားနှစ်ဦး စနောက်ရင်းဖြစ်တဲ့ သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်က လူသတ်မှု
တောင်ငူမြို့ရှိ ၀က်သားသတ် လိုင်စင်ရ သူတို့၏ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန် ပြုမူသည့် လုပ်ရပ်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး ဆိုးရွာစွာ သေဆုံးခဲ့ရမှု
ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ အထောင် ရဲစခန်း အပိုင်၊ ရှားခဲကြီး-ရှားခဲလေးအင်း ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်
နိုင်ငံရေးအရ မလိုလားတဲ့သူတွေကို ဆင်ခြေပေးပြီး ဖမ်းနိုင်သောဥပဒေ များကို ဖျက်သိမ်းရမည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
The Voice Weekly ၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ရှင်းလင်း ဖြေကြားချက်
လူမျိုးခြားများ ခိုးဝင်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နယ်စပ်ဒေသများတွင် Satellite ဂြိုလ်တုများသုံးပြီး စောင့်ကြည့်မည်
by Seaman Nayminthu on Monday, October 22, 2012 at 11:28pm --- ဦးဖိုးသာအောင်
22,10 , 2012
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်မြင်မှု အတွက် အဓိကသော့ချက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီပင် ဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီသည် ခွဲခြားလို့မရပါ။
အပွင့်နှင့် အညှာလို တဆက်တစပ်တည်း ဖြစ်သကဲ့သို့ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေသည်လည်း ဖြစ်သည်။
တရားမျှတမှုကို မလိုလားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီကို မလိုလားကြခြေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက် တိုက်နေကြသည်။
၀ါဝါ၀င်း လယ်သိမ်းမှု နေပြည်တော်ထိ ချီတက် ဖော်ထုတ်မယ်
by Myanmar Online News on Monday, October 22, 2012 at 11:10am ·
ဆန္ဒပြ လယ်သမားများနဲ့ ရဲအရာရှိတချို့၊ ဓာတ်ပုံ- နန်းဆိုင်နွမ်/ ဧရာဝတီ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ၀ါဝါ၀င်း ကုမ္ပဏီမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ကို ပြန်လည်ရယူလိုသည့် အတွက်အဆိုပါ လယ်သမားများသည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီမှ စကာ ဌာန ဆိုင်ရာမှ အကြောင်းမပြန်မချင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမည်ဟု သိရသည်။
by သိုး ကလေး on Friday, October 19, 2012 at 10:39pm ·
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး - No one above the Law
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သဘောပေါက်နိုင်တာက တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ မည်သူတဦးတယောက်မျှ ရှိမနေရဘူးဆိုတာပါ ။ ဒီသဘောတရားကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးကအစ သိနေပါပီး တရားဥပဒေ ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ပြောလိုက်ရင် ဥပဒေစာအုပ်ထဲက ဥပဒေတွေကို အားလုံး လိုက်နာခြင်းလို့ အကြမ်းဖျင်း မှတ်ယူကြမှာပါပဲ ။
by Myanmar Journal on Monday, October 22, 2012 at 6:05pm ·
ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓါးပြမှု လျော့ပါး
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတကာသင်္ဘောတွေကို ဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးပြတွေက ပစ်မှတ်ထား ပြန်ပေးဆွဲထားမှုတွေဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ကျဆင်းသွားခဲ့ပေမယ့်၊ အာဖရိကတိုက် ဂီနီပင်လယ်ကွေ့ (Gulf of Guinea) မှာတော့ သင်္ဘောတွေကို ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကတော့ ပိုများလာတယ် လို့၊ မနေ့က တနင်္လာနေ့က လန်ဒန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာရေကြောင်းသွားလာမှုဗျူရို (International Maritime Bureau) ကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ် ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း-၂)
by Yangon Press International on Monday, October 22, 2012 at 1:07am ·
ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ နေတာက ဒုက္ခသည်တွေကိုပေးမယ့် ငွေကြေးတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်နေတာပါလို့ ရေးထားတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်သလို၊ သူတို့ရှုမြင်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကို ဒေါ်စု မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ကချင်လူထု စိတ်ပျက်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Read more »
ဘာသာပြန်စာအုပ်များ MyanmarDaily.net shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ 's photo . ဘာသာပြန် (၁၇၀ အုပ်) (၁)သူသေကိုယ်သေ (ြ...
ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် ၁။ မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး - ဦးကုလား http://www.mediafire.com/?u958zlksuy1cvmn ၂။ ရာဇာဓိရာဇ်...
လင်းယုန်မောင်မောင် (အထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာ စာအုပ်များ)
ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် လင်းယုန်မောင်မောင်..ကတ်စထရို.pdf https://yadi.sk/i/KcrA1sLkfdeGR လင်းယုန်မောင...
၈၈ အပိုင်း ၃ သို့မဟုတ် ရောက်တတ်ရာရာစကားများ---
Soe Naing ဒုက္ခပဲ--- မေးလ်ရှည်တာနဲ့ သူများတွေ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးပြီး အပိုင်းခွဲလိုက်တာပါ။ အပိုင်း ၃ ကိုမျှော်နေတယ်ဆိုတော့ ...
မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့၊ သဘောသဘာဝ၊ အရည်အသွေး၊ အနုပညာနှင့် ဗဟုသုတများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာတို့၏ အစဉ်အလာ ဂုဏ်သိက္ခာများကို လေ့လာ၊ အတုယူ၊ ထိန်းသိမ...
by Myanmar Journal on Sunday, August 12, 2012 at 5:40pm လန်ဒန် အိုလံပစ် နောက်ဆုံးနေ့ ၁၉၇၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ယူဂါဒ...
မြန်မာ စာအုပ်များ (၂-၁)
မြန်မာ စာအုပ်များ ကိုးပွင့်ဖူးစာ - ဒဂုန်ရွှေမျှား http://www.mediafire.com/ ?xqi7c9c118lhq6v ........ဆိုသည်မှာ စာစုများ(၁) - အရိုး ...
Politicide (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား နိုင်ငံရေး...
ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တေ...
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တ...
လက်ပန်တောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ၀ိုင...
မှားခဲ့တာလား ၊ မှားနေဆဲလား ၊ ဆက်ပြီး မှားအုန်းမှာလ...
((((((နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူ . . . ဘယ်သူလဲ )))))...
အခန်း(၄) ညှင်းပန်နှိပ်စက်မှု ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ...
ဒီမိုကရေစီအတွက် ရုန်းကန်ကြ - အမှတ်စဉ် (၉) မျိုးသန်...
“နိုင်ငံရေးမှာ စောတာ နှေးတာ မရှိဘူး” ABSDF ဒုဥက္ကဋ္ဌ ...
စာအိတ်ထဲကျည်ဆန်ထည့် စိန်ခေါ်ခံရပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေ...
ခေတ်သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါရာဒိုင်း ပါမောက္ခ ဖူကူယားမား၏...
၀ါဝါ၀င်း လယ်သိမ်းမှု နေပြည်တော်ထိ ချီတက် ဖော်ထုတ်မယ...
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lint...
မြန်မာပြည်နှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပေ...
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း လွန်းတင် ကွယ်လွန်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၁၀)
EMG မှမေးမြန်းသောမေးခွန်းအား သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ ဖြေ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၁၀)
ငါ့ ကိုသောင်းကျန်းသူလို့ မခေါ်ကြပါနဲ့ ။
သမိုင်းထဲက ဆရာဝန်များ (ရှားလော့ဟုမ်းကို ဖန်တီးခဲ့သ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၁၀)
'အစိုးရ' နှင့် 'နိုင်ငံတော်'
သမိုင်းထဲကဆရာဝန်များ ၊ (တော်လှန်ရေးသမား၊ပြောက်ကျား...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၁၀)
ပုဂ္ဂလစာရိတ္တနဲ့ ဖောက်ပြန်လေသော နိုင်ငံရေးအမြင် ၂-ရပ...
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအတွင်း စည်းရုံးရေးပြသနာ နှင...
ပဒိုစောဒေးဗစ်ထော ဈာပန KNU တပ်မဟာ ၇ မှာ ကျင်းပ
ဆည်းပူးလေ့လာ နိုင်ငံရေးပညာ အခန်း (၂)
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်နှင့် အ...
ပဒိုစောဒေးဗစ်ထော ဈာပန KNU တပ်မဟာ ၇ မှာ ကျင်းပ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၁၀)
ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ မြန်မာနိုင်ငံခရီး သတင်...
အစိုးရမင်းများ ခင်ဗျား -
မြန်မာနဲ့ စစ်ရေးတိုးမြှင့်ဆက်ဆံဖို့ အမေရိကန်စဉ်းစာ...
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း (သို့မဟုတ်) ငြိမ်းချမ်းရေး ပိသ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၆-၁၀)
ပဲ့ကိုင်ရှင် ပြည်သူ့ဆန္ဒ ဖြစ်လာစေဖို့...
ဖွဲ့စည်းပုံကို မည်သူ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်မည်နည်း
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၁၀)
“ အင်္ဂုလိ စီမံကိန်းကြီးများနှင့် ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ယာ...
OIC ဘာလဲ၊ မြန်မာပြည် ဘယ်လဲ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၄-၁၀)
လက်နက်နှင့် တရားမျှတမှု - ၂